८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १६:१९ 22/03/2019 पोखरा समाचार
पोखरा । भरतपोखरी विकास मञ्चको आयोजना एवं वडा शिक्षा समिति, पोखरा महानगरपालिका– ३३ को सहयोगमा आज आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय आवश्यकता अनुसारको शिक्षाको मार्गचित्र हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘सङ्घीय शासन प्रणालीमा विद्यालय शिक्षा, स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताले संविधानप्रदत्त अधिकार बमोजिम स्थानीय तहबाट बन्दै गरेका शिक्षा नीति दीर्घकालीन सोचका साथ बनाइनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सिंहदरबारका अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेका अवस्थामा अब काम नगर्ने छुट नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यकता र व्यवहारका आधारमा शिक्षा नीति तयार गरी बढ्नुपर्ने बताए ।नेपाल हरेक दृष्टिबाट सम्पन्न राष्ट्र भएको…
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १५:३३ 22/03/2019 पोखरा समाचार
पोखरा । राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन पुष्पलाल राजमार्गको कास्की खण्डमा सडक फराकिलो बनाएर स्तरोन्नतिको कामले तीव्रता पाएको छ । पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गको पोखरा महानगरपालिका–२५ याम्दीदेखि कास्की र पर्वतको सीमा नयाँ पुलसम्मको ३७ किमी दूरीमा हालसम्म करीब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको योजनाले जनाएको छ । पुष्पलाल ९मध्यपहाडी० राजमार्ग योजना पर्वतले तीन वर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने गरी सो खण्डलाई तीन भागमा विभाजन गरी २०७४ असारमा दुई अर्ब ९३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सडक विस्तारका क्रममा अधिकांश स्थानमा बिजुली र खानेपानीका पाइप स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुँदा ढिलाइ भए पनि हालसम्मको…
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १०:४२ 22/03/2019 पोखरा समाचार
बाँके । भारतीय भन्सारले अनलाइन सेवामा समस्या देखिएको भन्दै रुपैडिहामा रोकेका पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका १४० ट्यांकर नेपाल भित्रिएका छन् । अनलाइनमा समस्या आएपछि ट्यांकरसँगै फलफूल र तरकारी बोकेका दर्जन बढी ट्रक पनि दुई दिनसम्म सीमामै रोकिएका थिए । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अधिकृत शरदकुमार केसीले पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकर भारतीय भन्सारमा अनलाइन सेवा सञ्चालन भएपछि बिहीबार राति नेपाल भित्रिएको बताए । भारतले भन्सारमा अनलाइन प्रविधि लागू गरेपछि विभिन्न समयमा नाकामा समस्या हुँदै आएको उनले बताए । भारतको बहराइच नजिकै अप्टिकल फाइबरमा समस्या आएर अनलाइन दर्ता नभएपछि ट्यांकरसँगै अन्य मालबाहक ट्रकहरु रुपैडिहामै…
५ चैत्र २०७५, मंगलवार १६:४४ 19/03/2019 पोखरा समाचार
पोखरा । संस्कृती संरक्षण गर्ने मुख्य उद्धेश्यका साथ सेफ किड प्रि– स्कुलले होली कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पोखराको नयाबजारमा अवस्थित उक्त विद्यालयले कार्यक्रममा विद्यालय अध्यानरत बच्चाबच्चीहरुको लागि होली पर्वको महत्व तथा उक्त पर्वको बारेमा सकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । बच्चाहरुलाई कितावी ज्ञान मात्र नभई विभिन्न मनोरञ्नात्मक कार्यक्रमको पनि आवश्यक रहेको र समाजमा भैरहेको विकृतीबाट बच्चाहरुलाई टाडै राखी सव्य भव्य रुपमा होली मनाइएको विद्यालयले जानकारी दिएको छ । विद्यालय होलीमा मात्र नभई अन्य विभिन्न चार्डपर्व तथा संस्कृतीहरु पनि आफ्नै मौलीक पारामा मनाउदै आएको र त्यसैलाई निरन्तरता दिनको लागि उक्त…
५ चैत्र २०७५, मंगलवार १४:०९ 19/03/2019 पोखरा समाचार
पोखरा पोखराको मुटु वा भनौँ मुख्य बजार केन्द्र चिप्लेढुंगा । सडक छेउमा रहेको एउटा ढुंगा वर्षाको याममा पानि पर्दा निकै चिप्लो हुने । त्यसैले त्यस क्षेत्रको जाम नै चिप्लेढुंगा रहन गयो । तर, अहिले चिप्लेढुंगा नै पहेलेढुंगा भएको छ । चिप्लेढुङ्गाको इतिहास बोकेको ढुङ्गामा पहेलै रङ्ग पोतिएको छ । मुख्य बजारमै भएको उक्त ढुंगामा जो कोहीका आखा पनि झट्ट पर्ने गर्दछ । ढुंगाको प्राकृतिक रङ्ग बिगारेर पहेलों रंग कसले पोत्यो ? भन्ने कुरामा महानगरलाई पत्तै छैन । ढुंगालाई त्यही अघि घर भएका धरभेटिले ढुंगा मा पहेलों रंग लगाएको पुष्टि भएको…
चैत्र २२ गते ‘पोखरामा प्रमोद खरेल’
५ चैत्र २०७५, मंगलवार १२:५६ 19/03/2019 पोखरा समाचार
पोखरा । यहि चैत्र २२ गते एभिन्यु ग्रुप अफ कर्मशको आयोजना र मनिटरिङ पिस फाउण्डेसनको सह आयोजनामा ‘पोखरामा प्रमोद खरेल’ एकल साँझ कार्यक्रम हुने भएको छ । पोखरा सभागृहमा दिउँसो ४ बजे हुने उक्त कार्यक्रममा प्रमोद खरेलले आफ्नो १० वटा गीतहरु प्रस्तुत गर्ने आयोजकले जानकारी गराएको छ । कार्यक्रममा खरेल सहित गायिका मिना निरौला, हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार मनोज गजुरेल, अभिनेत्री केकी अधिकारी लगाएतको प्रस्तुती रहने बार्दली मिडियाका प्रोपाईटर मन क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । अन्य ठाउँहरुमा लाइभ ब्याण्डहरुको माध्यमबाट धेरै कार्यक्रमहरुमा खरेलले प्रस्तुती दिएको भएपनि पोखरामा नै पहिलो पटक यसरी…
४ चैत्र २०७५, सोमबार १०:२८ 18/03/2019 पोखरा समाचार
गोरखा गोरखाको पालुङटारमा जारी गण्डकी प्रदेश स्तरिय लिगलिग पालुङटार मेयर कप फुटबल प्रतियोगितामा आइतबार भएको खेलमा गोरखा नगरपालिका गोरखा र पुतलिबजार नगरपालिका स्याङजा सेमी फाईनलमा प्रबेश गरेको छ । आइतबार भएको खेलमा गण्डकी गाउँपालिका गोरखालाई ६–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै गोरखा सेमिफाईनल प्रबेश गरेको हो । गोरखालाई सेमिफाईनलमा पु¥याउन म्यान अफ द म्याच हुन सफल जर्सि नं ६ का जमिर मास्केले ह्याट्रिक गरका थिए । जर्सी नं १२ का कृष्ण परीयारले २ र जर्सी नं ९ का अर्जुन गुरुङले एक गोल थपे । तर गण्डकीले एक गोल पनि फर्काउन नसकेको…
पोखरामा गाडी चढ्न पैसा चाहिँदैन
३ चैत्र २०७५, आईतवार १७:४० 17/03/2019 पोखरा समाचार
पोखरा । पोखराका बसमा ई–टिकेटिङ सिस्टम लागू गर्ने तयारी थालिएको छ । नयाँ बर्षको सुरुदेखि नै सबै बसहरुमा स्मार्ट कार्ड मार्फत भाडा तिर्ने गरी ब्यवस्थापन मिलाउन लागिएको हो । यसका लागि पोखरा महानगरपालिका, पोखराका बस ब्यवसायीहरु र काठमाण्डौंको एनक्लाउड कम्पनी बीच आइतबार सम्झौता भएको छ । यो प्रविधि सुरु भएपछि ब्यवसायीले प्रत्येक यात्रुलाई बिशेष प्रकारको कार्ड उपलब्ध गराउनेछन् । यात्रुले बोकेको त्यही कार्ड गाडीका सहयोगीले मेसिनमा ‘टच’ गराउनेछन् । जिपिएस जोडिएकोले यात्रा गरेको ठाउँको रकम स्वतः कार्डबाट बैंकमा ट्रान्सफर हुनेछ । कार्डलाई १ सय ५० रुपैयाँ पर्ने र एक पटकमा…
हिमालय क्लवको अवलोकन भ्रमण
३ चैत्र २०७५, आईतवार १६:४० 17/03/2019 पोखरा समाचार
पोखरा । हिमालय क्लव पोखरा १६ बाटुलेचौरको नियमित बार्षिक कार्यक्रम नवलपूर जिल्लाको अमलटारीमा रहेको अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेको अवलोकन भ्रमण सम्पन्न भएको छ । थारु साँस्कृतिक रहनसहनको अध्ययन गर्न हिमालय क्लवको एक टोली सो स्थानमा पुगेको थियो । सहभागी टोलीलाई होमस्टे व्यवस्थापन समितिले स्वागत गरेको थियो । सहभागीहरुले थारु साँस्कृतिक कार्यक्रम, नवलपुरको शाश्वत धाम र मूनाल फुड्स प्रा.लि.को पनि अवलोकन गरेका थिए । गैंडाकोट नवलपुरमा रहेको विजय विकास श्रोत केन्द्रसँग हिमालय क्लवले अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत गरेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ का वडा अध्यक्ष जीवनप्रसाद आचार्य,…
ताजा खबर पर्यटन
३ चैत्र २०७५, आईतवार १४:३६ 17/03/2019 पोखरा समाचार
गोरखा गोरखाको पालुङटारमा आयोजना गरिएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय लिगलिग पालुङटार मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता को क्वाटर फाइनलबाट आयोजक पालुङटारको दुवै टिम बाहिरिएको छ । क्वाटर फाइनलको (शनिबार) भएको भएको पहिलो क्वाटर फाईनल खेलमा गैंडाकोट नगरपालिका र देवचुली नगरपालिका विजयी भएका छन् ।पहिलो खेलमा गैंडाकोट नगरपालिका नवलपुरले ले आयोजक पालुङटार बी गोरखालाई १ – ० ले हराएको छ । सो खेलमा विजयी टिम गैंडाकोटका रोशन दर्लामी मगर म्यान अफ दी म्याच घोषित भएका छन् । निकै प्रस्तिपर्धात्म रुपमा भएको खेलमा पालुङटारले आत्मघाती गोल गरे पछि गैंडाकोटले विजयी हुने अवसर पाएको थियो…